Okunye Okuphakelayo Ukulima Kwemaggotha ​​ye-BSF • I-Yurie BSF
Ngaphandle kokuthenga okuphakelayo
I-Maggot iyindlela ehlukile yokudla izinhlanzi nezinkukhu.
Ukuqinisekisa ibhizinisi lakho lemfuyo liyaqhubeka likhula.
Ngaphandle kokucindezelwa ukuthenga amapelisi
Indawo ye-BSF Maggot Ranch ngaphandle kwe-Smell
Ufuna ukwazi indawo esiseduze edolobheni lakho?
Kanjani: Indawo yakho ngokuzenzekelayo itholakele ngesistimu iboniswa yinamba yezinombolo zamakhodi weposi.
Ngakho chofoza nje ukusesha.
Uma ufuna indawo enembile kakhulu, sicela ugcwalise uhlobo olungenalutho lwekholomu idolobha / umzana lapho ukhona manje.
Izindleko zokukhiqiza ezingabizi
Ukukhiqiza isosha elimnyama ukuphuza izibungu kulula futhi kungabizi, singasebenzisa udoti, udoti nomquba.
Okuqukethwe okunomsoco okuphelele, amino acid kanye namaprotheni aphezulu kusiza kakhulu izilwane ezinempilo ezikhuthaza ukukhula kwezilwane ezifuywayo.
IZINDLELA EZIKHULU EZIKHULU NGAPHANDLE NE-SMELL, Ukulandwa kwamahhala kuphephile futhi kukhululekile. I-SAFE ayikho emibonisweni yomphakathi futhi iFANELEKA kwabalimi.
I-BSF iMaggot yanamuhla ngaphandle kweBau ihlose ukukhiqiza izimbungulu ngezinhlanzi nezinkukhu zokudla.
Ukuhlakulela i-maggot esifanele kufanele kube ne-smorless, ngaphandle komshini, ngaphandle kwezidakamizwa futhi ngaphandle kokuvutshelwa ngakho imiphumela ingakhuliswa.
Iphephile ngoba ingaboniswa ngumndeni futhi ikhululekile ekuyikhipheni.
Qhubeka Uhlakulela AmaMaggots
Izitshalo zeMaggot zingacutshungulwa bese zisetshenziselwa ukunamathiswa kwamagogane, i-maggot i-maggot nama-pellets ama-maggot noma bukhoma (ama-magot amasha)
Ngale ndlela ungaba nemfuyo eminingi ngaphandle kokuthenga ukudla kusuka esitolo futhi.
Thola ama-pellets kanye nokudla kwesitolo.
Qhubeka nesicelo seMaggot
Ukudayiswa kweMaggot? SELL YURIE BSF !!!
Awudingi ukudideka mayelana nokumaketha kwamagogane.
Ngoba u-Yurie BSF uyayithenga.
Qhubeka nokuthengisa kwe-Maggot
U-Yurie BSF unikeze u-Rp100.000.000 usizo lomngani omkhulu / abantu ukuthuthukiswa kwebhizinisi.
Izimali zosizo zinikezwa ukwandisa umthamo wokukhiqiza.
Qhubeka Namabhizinisi Amathuba
Ngeke ube yedwa.
I-AMBASSADOR YURIE BSF ilungele ukuba khona epulazini lakho.
Hlola indawo ye-99
Ku-YURIE BSF UNIVERSITY uzonikezwa ukuqeqeshwa okuphambili.
Ukuqinisekisa ukulima kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kwephunga ngokuhambisana ne-SOP (inqubo ejwayelekile yokusebenza) yokulima kwe-BSF ngaphandle kokuhogela.
I-Yurie BSF University yaqhubeka
Isiqukathi esisemthethweni sokuthenga nokuthengisa maggot nokunye ukuthuthukiswa kwebhizinisi.
Qhubeka nokusebenzisana kwama-Maggot wase-Indonesian
Yiba yingxenye yomphakathi we-Yurie BSF ukuze uhlakulele ndawonye ibhizinisi leMaggot ezweni lezolimo zezolimo.
Lesi sinyathelo sikwazi ukuhlangabezana nesidingo semakethe yasekhaya nasemhlabeni jikelele.
Lolu hlelo lwe-CSR luhloselwe kulabo abafuna ukufunda, kodwa abakwazi ukukhokhela iphakheji le-BSF yokulima ukuhlunga ngaphandle kokuhogela
Qala imisebenzi yansuku zonke ngomthandazo oyimpoqo wokuhambisa usuku lonke noNkulunkulu.
Ngakho lolu hlelo lwe-Yurie BSF yi-MAIN no-NUMBER ONE yazo zonke izinhlelo zokusebenza.
Kungani Ababelethi Bathanda U-Yurie BSF
Ukufunda ukuhlakulela umlingo ngaphandle kokuhogela kulula kakhulu ngohlelo oluhlolwe ngempumelelo.
Isiqondiso esinikwe sasize siphumelele ekuphumeleleni kwami ​​kufaka phakathi ukuvuna isivuno sokuvuna sebhizinisi lami le-maggot
Ukubekezela kukaMbak Yurie ukungiqondisa kuyinto eyingqayizivele, okumatasa ehhovisi akuyona inkinga ngoba umphathi unesiguli esikhulu
Hlola i-99 Indawo yeMaggot ngaphandle kwe-Bau Ranch
STOP ukuchitha imali yokuthenga amapelisi, abalimi abangu-99% be-catfish nabanye abaphuma ebhizinisini ngoba abakwazi ukuxhasa imali enkulu yokufinyelela ku-60-70%, uma uqala ukubiza izindleko zokukhiqiza, ikakhulukazi ukondla kungafinyelela ngisho ne-80%.
Jabulela ukugcinwa kwezindleko zezinkukhu kudla ku-82%. Ukwenza lokhu ngokwenza izinkukhu zakho zokudla ngezinkukhu zemaggot, njengemfucumfucu we-maggot ukuze izinkukhu zakho zikhule kakhulu. Isikhathi sokugcina imali futhi ugxile ekuqhubekeni ukwandisa inani lemfuyo yakho
Fundza noma kuphi
Vele ubukele ngesifundo sevidiyo eselula esenzelwe ukulima kwe-BSF ngaphandle kokuhogela.
Ungalanda kanjani isicelo se-Yurie BSF ku-Playstore.
Qhubeka Indlela Yokusebenzisa I-Maggot
Landa indlela yokuCubungula
Umgogodla Wokudla Kwezilwane
Ukuze uthole imiphumela esiphezulu kusuka kumgogodla we-BSF, ngaphambi kokuba unikezwe njengezinhlanzi nezinkukhu zezinkukhu, sincoma ukuthi uqale ukuyiqamba ibe:
Amahlumela amasha / aphilayo
Indlela yokucubungula iMaggot ngokudla kwezilwane
Izindlela Ezisheshayo Zokufunda Ukuhlakulela AmaMoggots Angabonakali.
Enye yezithiyo zokuphumelela kuyihlazo lokubuza, u-Yurie BSF unikeza isevisi yamakhasimende akhethekile, ukuphendula izinto ngebhizinisi le-maggot namasu ezobuchwepheshe.
Shayela manje futhi
Wonke umuntu uyazi izimpukane. Lezi zinambuzane zizungezile. Ziza ngoba zizwa iphunga lokudla iphunga. Ngaphandle kwalezi zimpukane ezicasulayo, nazo zithwala izifo zezifo ezifana nesifo sofuba (isifo sofuba), i-dysenteryamuba, i-cholera nezinye izifo ezihlukahlukene.
Ukusabalala kwalesi sifo ngokudla okudliwa ngabantu emva kokuba kuphethwe yizimpukane. Kodwa empeleni izimpukane ziletha izinzuzo eziningi kubantu.
Izimpukane zihlobo lwezinambuzane (i-cyclorrapha diptera order order), izimpukane ze-morphologically zinama-antenna amancane, zinezibili ezimbili zamaphiko okungukuthi i-wing yase-seapsang ne-pair of amaphiko amancane asebenza ukuze alondoloze ibhalansi uma ehamba.
Izifo Izindiza Zezinambuzane
Kungani izimpukane zibizwa ngokuthi izinambuzane ezisabalalisa isifo? Ngoba uma izimpukane zihlala endaweni engcolile, cishe mayelana ne-125.000, ama-germ azosala lapho ahlala khona.
Lokhu kwenzeka ngokwemvelo ngenxa yendlela ehlukile yokudla izimpukane. Uma behlala ngokudla, ngaphambi kokuba baqale ukudla izimpukane bazokhipha uketshezi emlonyeni wakhe.
Imisebenzi ye-Fluid njenge-enzyme esiza ukusiza ukugaya ukudla. Lokhu kusetshenziselwa uketshezi kushiyiwe ekudleni futhi uma kudliwa ngabantu kungadalulwa kwezifo ezihlukahlukene.
Izinto Ezibalulekile Ngezimpukane
Izimpukane ziza endlini ngoba zizwa imithombo yokudla. Ukuze ususe, gcina ukudla esitsheni lapho izimpukane azikwazi ukuhlala khona.
Ukuze uthole ukudla, izimpukane ziyasebenza phakathi nosuku. I-fly kuye ngokuthi uhlobo lwayo ingakhiqiza phakathi kwamaqanda we-75-126 nezinhlanzi ezinsukwini ze-1-4.
Ngokwemvelo, iminithi ye-5 izosula ngokuphilayo, futhi uma idliwa ngabantu, iyobangela ukuhuda nokunye okunye.
Umjikelezo wokuphila we-fly uhluka, phakathi kwe-5 kuya ezinsukwini ezingu-30. Izimpukane ze-BSF ziphila kakhulu maduzane ezungeze i-5-8 ngosuku ngenkathi zihlala izimpukane eziluhlaza zifinyelela ku-30 ngosuku.
izimpukane zendlu zingakwazi ukuhamba ngesivinini se-XNXX km ngehora, yilokho okubangela ukuthi udoti noma ukudla esasilahla nje kungekudala kuzothathwa.
Ikakhulukazi ezindaweni lapho izinkolo zezindiza zizala khona.
Izinzuzo zezimpukane kubantu
Yini esetshenziselwa ezimpukeni yinzalo yabo, evame ukubhekwa njengezibungu noma maggot noma magot noma i-gape noma i-maggot noma yokuqapha noma ukuyeka ukunye nokunye.
Kwamanye amazwe izingane izimpukane zithengiswa ukuze zisetshenziswe ngabantu. Banikeza amamenyu akhethekile njenge pasta, isobho kanye ne-pizza.
Emhlabeni wezokwelapha, izimpukane zezingane, okungukuthi izimpethu noma izibungu noma maggot noma uget-uget, zisetshenziselwa njengethuluzi lokwelapha ngezifo zangaphandle ngokuvamile ezibizwa ngokuthi "ukuphathwa kwemilenze".
Lapho izibungu zifakwe khona nxazonke zesilonda ukuze zidle isikhumba nenyama yezilonda ezibulalayo ezitheleleke, zibulale amabhaktheriya bese udla isikhumba esifile. Ukwenza kube lula ngomuthi ukumboza amanxeba.
I-Magot iphinde isetshenziswe ngamaphoyisa ukuthola isikhathi sezidumbu ezinkantolo ezihlukahlukene zokubulala.
Enye inzuzo ukuthi okuqukethwe kwegciwane le-refilin ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa yizinkampani njengezinamathiselo. Amandla ayo okunamathela nokuqina okunamandla kunamandla kakhulu kunelawo umuthi we-raber.
Igoli ye-refilin nayo ingaphatha izifo ezihlukahlukene ze-arterial neerve and meina. Lapho izinzwa ezimbili zivimbela ukugeleza kwegazi ne-oksijini ebuchosheni.
Ngaphandle kwemifino kanye nama-bacteria, ama-magog ahlanganisa amalahle e-oragnik, imfucuza yasendlini, imfucuza yemboni, imfucuza yabantu, umquba wezilwane, izidumbu nezinye izinto eziphilayo.
Enye inzuzo abantu abaningi abayithatha e-Indonesia iqondisa lezi izibungu zibe yindalo yemvelo kanye neyezinye izinhlanzi nezinkukhu.
Ngokuvamile i-maggot isetshenziselwa kuqala i-pasta yamaggot, ama-maggot pellets, ufulawa wama-maggot, umqubu omusha, i-maggot e-Chrispy, i-maggot eyomile, induku yemaggot, i-maggot efriziwe, i-oven yamaggot njalo njalo.
Lezi zilungiselelo zamaggot zinikezwa ngokuqondile emfuyweni noma zigcinwe njengempahla yezinhlanzi, izinkukhu kanye nokudla kwama-reptile.
Ukusetshenziswa kwamagog okudla kwezilwane zemvelo futhi lokhu kungenxa yokuthi imaggot icebile izakhi, i-amino acids ephelele futhi iphrotheni ephezulu. Amaphrotheni aqukethe izigaba kusuka ku-40-56%.
Izinhlobo ezihlukahlukene zomzimba zezimpukane. Ezinye zincane, zikhulu, zinkulu nezincane kuye ngokuthi zihlobo luni.
Ngokuvamile banalo ikhono elihle lokuvumelanisa nokunyakaza kwomoya.
Inhloko yezindiza inamehlo amakhulu amakhulu asezinhlangothini nasesandleni senhloko, izintuthwane, i-ocelli, umlomo. Iso lingahamba ndawonye nekhanda.
Izimpukane zinama-neurons azwela ukunyakaza futhi futhi njengethuluzi lokulawula isiqondiso sombono mayelana nokuhamba okuzungezile.
Ngakho-ke kuzwela ukufeza ukunyakaza okuhamba ngezinyawo, ukujika nokuguqa ngesikhathi esisodwa ukubona ukuma kwento.Azikho izinhlobo zezinkukhu ezinamazinyo.
Okudliwa yizimpukane yizinhlamvu ezincane (impova) nokudla okuketshezi. Ngokuqondene nokudla okuqinile abakwazi ukukudla.
Kodwa ezinye izinhlobo zezimpukane ze-tabanidae zinommese emlonyeni wazo ukwenza imidwebo iwele futhi iphuze igazi labo.
Umsebenzi ukubamba amaphiko futhi ube nemisipha yendiza engxenyeni yesibili. Izingxenye eyodwa no-zitatu zincane. Engxenyeni yesithathu i-thorax ine-dumbbell njenge-counterweight uma ihamba.
Uma ukuxubha noma ukulinganisa ubuso babo obusweni ngendlela efanayo, futhi isikhundla sezindiza ezincane singaphansi komzimba wesifazane.
Kungakabiphi ngemuva kokuba isikhundla sokubuthana sabuyela emuva. Umama okhulelwe wesifazane okhulelwe uyobheka indawo eduze noma ngaphezu kokudla ukubeka amaqanda.
Ngaphandle kohlobo lwe-BSF fly (Hermetia illucien) olubeka amaqanda amaqanda hhayi ngaphezu kokudla ngqo kodwa eduze nomthombo wokudla.
Indawo evame ukufunwa yiyo enemithombo eminingi yokudla njengoba i-semala ukudla ibe izibungu.
Amaqanda amaqabunga azovama ngokujwayelekile ngesikhathi samahora ngenkathi ehlukile kunezimpukane ze-BSF ezidinga izinsuku ezingu-2-4 kuze kuphele amaqanda.
Izimpukane Zezithelo (izinhlobo ze-drosophila)
Izimpukane Zenyama (sarcophagidae)
Izimpukane ezihlaza (calliphora vomitoria)
Izimpukane zamaHhashi (ithebhu yasekhaya)
Izimpukane Zokususa (psychodidae)
Izimpukane Zesihlabathi (i-spiriverpa lunulata)
Izimpukane zasekhaya (musca domestica)
I-BSF Izimpukane (hermitia illucien)
Izimpukane zezithelo ziyizinambuzane kubalimi ngoba zivuna izithelo. Le ntambo ilula kakhulu ukuzala ngoba ukudla kutholakala kakhulu emasimini futhi kusekelwa isimo sezulu esihle sase-Indonesian kubo.
Esikhathini semvula lezi zimpukane zizala kakhulu.
Izinhlamvu zezimpukane zezithelo
Ubude be-3 mm fly
Umbala womzimba unombala ophuzi noma oqoshiwe
Unamehlo abuhlaza obomvu
Unesisu sokulenga lapho uhamba kancane
Iqanda libunjwa njengenyanga yenyanga
Amaqanda abekwe ngamaqembu ngaphansi kwesikhumba noma ngamanxeba noma izithelo ezingalungile
Inani lamaqanda liphathelene ne-15 okusanhlamvu
Amaqanda aqhekeka emva kwezinsuku ezimbili
Ubude be-5 mm pupa
Isisu sinomugqa ohamba phambili we-3
Izindikazi ezindizayo zikhomba kakhulu
Isisu sesilisa siningi
Umjikelezo wokuphila uhlala izinsuku ezingu-16.
Izibungu ezibukhoma ezithebeni phakathi kwezinsuku ze-6-9
Izinsuku ze-7-30 izimpungushe
Izimpukane ezindala zihlala kumaviki angu-2-9
Le ntambo ihlukile futhi iyingqayizivele uma kuqhathaniswa nezinye. Izimpukane zenyama ziyi-ovoviviparous, okungukuthi, lokho ababeka phezu kwamanxeba, ukungcola, izidumbu, ukubola kwezinto eziphilayo njll kukhona amahlumela hhayi amaqanda.
Izinhlamvu zezinkukhu zezilwane
Izimpukane zenyama yenyamakazi yi-larvivara
Ubude behhashi le-6-14 mm lihamba
Unesikhumba esifubeni esifubeni esifubeni
Inemigqa emnyama ye-3 evulela emgodini we-dorsal
Yiba nesisu esivulekile
I-Fly Meat Fly Life Cycle
Izinsuku ze-14-30 zindiza
Isikhathi ngasinye lapho i-instar yokuqala iqala phakathi kwezibungu ze-40-80
Kunezinhlobo eziningi zezimpukane eziluhlaza, ngokuvamile eziphakathi nezinkulu. Kukhona isisu esinemibala egqamile, isiliva esicwebezelayo, eluhlaza kanye nobumhlophe.
Ukubeletha ngezidumbu ezinhlobonhlobo zezinhlanzi noma inyama ebolile noma izilwane zezilwane noma ukubola kwezinto zokudla.
Izimpukane eziluhlaza zinamakhono angavamile, zidinga kuphela okwesibili ukuthi zibeke amabhaktheriya namagciwane ekudleni abakutholayo.
Izimpawu zezimpukane ezihlaza
Ubude bomkhuhlane omdala okhulayo 1 / 4 "-1 / 12" intshi
Isisu sombala weglasi, isiliva esicwebezelayo, eliluhlaza neluhlaza
I-3 / i-4 enkulu yamasentimitha amakhulu amakhulu
Izinsuku ze-7-12 izimpungushe
Amaqanda aphuzi amaqabunga azosusa amahora we-8-18
Phila inyama ebolile noma izidumbu zezinhlanzi, noma umquba wemfuyo, noma udoti wokudla. Ungayeki ukulimaza izinsikazi zezinsikazi eziyimbangela yokwanda kwesisindo sezilwane. Ukulunywa kuyabuhlungu kakhulu.
Izimpawu zezimpukane zamahhashi
Ubude behhashi elidala lihamba nge-25mm
Amehlo akhe ahlaza noma amnyama
Amehlo ezimpukane zesilisa ahambisana nomunye nomunye
Amehlo ezindiza ezinsikazi ahlukene kakhulu
I-Horse Fly Life Cycle
Kanye ubeka amaqanda okuningi njengezinto ze-100-1.000
Amaqanda amahhashi amahhashi azoqhekeka phakathi kwezinsuku ezingu-5-7
Umjikelezo wokuphila wempukane yamahhashi omdala uphakathi kwezinsuku ezingu-30-60
Izimpukane zokulahla noma ukulahla izimpukane noma izimpukane zama-moth. I-larva ithanda imfucuza ephilayo njengodaka.
Izimpawu zezimpukane zokulahla
I-2 mm Ubude be-Fly
Amaphiko agcwele izinwele
Amaqanda azokhipha i-1-6 ngosuku
Izinsuku ze-10-50 izimpungushe
Isikhathi se-1-3 se-pupa
Kunezinhlobo ezimbili Zezimpukane Zesihlabathi:
Le ndiza iyingozi ngoba iluma izilwane nabantu abangabangela ukushaywa nezifo ezihlukahlukene. Njengomkhuhlane ophezulu.
Indawo yabo ezungeze ogwini, amahlathini ezinhlanzi, amahlathini nezinkomo zezinkukhu Lezi zinhlobo zezindiza ziyasebenza ebusuku phakathi kwamahora angu-9-4 ekuseni.
Uhlobo lweSanti lwe-Biting
I-Phlebotomus (i-leishmania i-vet vector)
I-Lutzomiya (i-leishmania i-vasta vector)
Izinhlamvu zezimpukane zeSand
Umzimba wakhe ugobile
Grey ephuzi futhi ephuzi
Unamahlo amnyama ahlanganisiwe
Sekude, imilenze ebushelelezi
Lapho ukuthula noma ukuphumula amaphiko njalo kuvulwe
Umzimba namaphiko zimbozwe ngoboya obuhle
Ikhono eliphakeme lokushayela elingamamitha amahlanu
Ukukhiqiza amaqanda, izimpukane zezinsikazi zidinga igazi emapulini kanye nama-apes
Uma ubeke phakathi kwamaqanda amnyama angu-30-50
Izimpukane ezindala ziyi-10-11mm ubude
Imilenze emnyama ensundu.
I-Sand Fly Life Cycle
Phila kuze kube yiminyaka engu-2 ubudala
I-Pupa noma i-cocoon phase yamaviki e-1-2
Izindlu Zasekhaya (musca domestica)
Izinhlobo zezinkukhu zasemakhaya yizimpukane ezivame ukuzungezile futhi ziyizifo zezifo. Indlukazikazi iqhuma ngokuvamile ukushada kanye kuphela.
Zibeka amaqanda azungeze amaqanda e-100 ekudakeni izinto eziphilayo ezifana nokudla, izidumbu, noma izidakamizwa.
Izinhlamvu zezindlu zezindiza
Ubude bomuntu omdala buhamba buphakathi kwe-5-8 mm
Unomugqa omncane we-4
Unesigqoko sekhanda esifubeni
Ubuso bakhe bumbozwe izinwele ezinhle ezasiza ukunambitha izitho
Ukuba namahlo okuyinkimbinkimbi
Amehlo akhe anezinkulungwane zama-lensi avumela umbono obanzi
Izindwangu ezine ze-wing zine-tapered futhi aziqondile (zigobile)
Ukuma komzimba kuphethwe kuze kube yinqani yekhanda
Yiba ne-ventilator yokugcina emuva ye-2
Ubude bezimoto bufinyelela ku-12 mm njengomuntu omdala
I-BSF inqamuzana noma isosha elimnyama libale noma ibutho lempi elimnyama linomzimba ophakathi kwe-15-16 mm nomnyama.
Isosha elimnyama linyuka emazingeni ashisayo nasezindaweni ezingaphansi komhlaba lingakwazi ukukhiqiza kahle. Ukuba khona kwendalo okutshala izitshalo eziningi zezimbali, lapho badla ngokusondeza okubalulekile kobuciko bembali noma amazolo amasa.
Kuvame ukubonakala ezindlini ngoba lezi zimpukane azidli. Okunye kubonakala endaweni equkethe udoti oluningi, udoti kanye nokungcola ukubeka amaqanda. Ngesinye isikhathi owesifazane omdala angabeka amaqanda 185 - 1.235.
Umndeni omkhulu: Stratiomyoidea
Izinhlobo: I-Hermetia iyicabanga
Igama leBinomial: i-Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
I-musca leucopa Linnaeus, i-1767
I-Hermetia rufiventris Fabricius, i-1805
I-Hermetia nigrifacies i-Bigot, i-1879
I-Hermetia pellucens Macquart, i-1834
I-Hermetia incens Riley & Howard, i-1889
I-Hermetia icabangela uCopello, i-1926
I-Hermetia ihlukumeza var. i-nigritibia Enderlein, i-1914
Incazelo ye-BSF Izimpukane
Izimpukane ze-BSF ezindala cishe zi-16 mm (5 / 8 amasentimitha). Le fly fly medium ine umzimba ngokuvamile black.
Ngemibala esukela emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka kuya e-metallic eluhlaza esifubeni futhi ngezinye izikhathi ngephuzu lesisu esisibomvu. I-tergite yesibili yesisu (isisu) inendawo ecacile.
Ngomumo omkhulu wekhanda futhi amehlo amakhulu kakhulu. Une-antenna ephindwe kabili ubukhulu bekhanda. Yiba nemilenze emnyama ye-6 ene-tarsi emhlophe.
Iphiko le-BSF lihlotshaniswa njengendwangu. Futhi lapho ephumula, amaphiko ahlotshiswe ngokuzungezile esiswini esiswini. I-Black soldier fly kuyinto fly fly.
Uma ibhekwa ngokobukhulu, umbala, nokubukeka okufana nezinambuzane nokunye okunjalo. Ikakhulukazi ngoba i-antenna yezindiza inxanxathelwa njenge-wasp.
I-Tarsi emuva kwendiza ephaphathekile futhi inamafasitela amabili amancane "avela" esiteshini sangasese esiswini.
Yini eyenza ukuthi le ntombazane ibonakale inesibindi esincane "sezinyosi". Izimpungushe ezimnyama azifani nezimpukane zezindlu nezimpukane eziluhlaza.
Abaningi kakhulu abazuzwa amasosha asemuva bangabantwana babo noma izibungu noma maggot noma uget uget noma maggots.
Yikuphi okwakukhona ngokuhamba kwesikhathi ngemithi, amaphoyisa, indawo yokudlela, izilwane zasemapulazini kanye nezimboni zezinkukhu zezinkukhu zezinkukhu ezitholakala ngokusho kwamasimu abo.
Izizathu ze-22 zabangane be-BSF
I-1. Kuphephile kubantu
I-Black Soldier Fly ayingozi futhi iphephile kubantu. I-BSF engenabungozi ihamba njengezimpukane zendlu nezinkukhu eziluhlaza.
I-BSF yabantu abadala inomlomo kodwa ingasetshenziswa kuphela ukuphuza ngakho akuyona imvamisa yesifo kubantu. Izimpukane ze-BSF azilumi noma ziyi-sting ezenza zivikeleke kubantu.
Phakathi nokuphila kwakhe i-BSF ayidlanga, ukugcina izimpilo zabo kuphela baphuza ijusi lembali kanye namazolo amasa.
Yilokho okwenza i-BSF ivikeleke kubantu. Futhi yingakho singavamile ukuhlangana ne-BSF endlini.
I-BSF ayikhipha izifo
Izimpukane ziza futhi zibuyele ekhaya ziyizimpukane eziluhlaza kanye nezimpukane ezinobungozi eziyingozi ngoba ziza ukufuna ukudla nokusabalalisa izifo.
Izibungu ezindala kanye ne-BSF azifakiwe kwisigaba sezinambuzane noma izidakamizwa. Ngokuphambene nalokho, amabutho amnyama aphuza izibungu adlala indima efanayo njengezibungu ezibomvu.
Ngokufanayo njengabaqothule bemfucuza, imfucuza kanye nomquba ongawabhubhisa ama-substrate eziphilayo futhi abuyisele izakhi emhlabathini.
I-BSF Larvae iyimithombo yamaprotheni evuselelekayo
Isosha elimnyama liphuza izibungu (BSF) ngumthombo wamaprotheni onomsoco (okuvuseleleka) okuhle kakhulu kumasiko we-aqua, ukudla kwezilwane, ukudla kwesilwane kanye nokudla komuntu.
I-Larva inesifiso esikhulu kakhulu esingasisebenzisa kabili isisindo se-substrate ngosuku olulodwa.
I-Larvae ingasetshenziselwa ukuqubuka komquba wamakhaya, izitshalo zokudoba, imfucuza yokudayiswa kwemakethe.
Kubandakanya imifino nezithelo, imfucuza yezolimo kanye nemfuyo yokudoba okubandakanya umquba wemfuyo kanye nokudoba kwabantu.
I-2. Umlomo we-BSF "Akaphelele"
Ngokungafani nezimpukane zezindlu, i-BSF inengxenye "engaphelele" yomlomo engadli futhi ingadla kuphela uketshezi njengamanzi embali noma amanzi amazolo.
Ngenxa yokuthi ayidli i-BSF ayiphanga ukudla kanye ne-enzyme yokugaya njengezinye izimpukane, ngakho-ke ayifuni isifo.
Amasosha omnyama avulekile awafuni ukufika emakhaya noma ekudleni kwabantu. Njengama-detritivores kanye nama-coprovores, izimpukane zezinsikazi ezithwala amaqanda ziyakuthanda kakhulu ekudlileni ukudla noma kumanyolo.
Isosha elimnyama lindiza alikwazi ukuhamba njengezinye izimpukane. Isosha elimnyama lihamba linamandla angaphansi kwamandla abo okulinganiselwe okudla ukudla njengabantu abadala.
I-3. Benign BSF
Isosha elimnyama lihamba kalula lihanjiswa futhi lihanjiswe lapho lingena endlini, ngoba aligweme lapho libanjwa.
Isosha elimnyama lihamba ngezindle zangcolile (lihlanzekile) futhi lingalimi noma lilume. Ukuphela kwesimiso sokuzivikela ngokumelene nezilwane ezidliwa yizimboni futhi ukufihla.
Ukunciphisa isibhamu sabantu abamnyama singaqhutshwa ngokuvala i-pupa ngaphambi kokuba ihlasele izimpukane.
Enye indlela ukugcoba, ukomile, ngesandla, izilwane zokudla, izindawo zokuqoqa indawo endaweni yenkukhu yokudla okuzenzekelayo, noma ukondla izinyoni zasendle.
I-4. I-Sakti BSF indiza
Umsindo owenziwe yi-BSF ungaphinda uphinde uphenduke ezinye izinhlobo zezimpukane. Futhi uma kunezimpukane eziningi kanye ne-bsf maggot endaweni lapho kungeke kube khona izimpukane nezinye izimbungulu ezingalindela ukuzulazula.
I-5. I-agent ye-Organic Waste Decomposition Agent
Ngolunye usuku i-magg ye-BSF ingadla imfucuza kabili engcolile, imfucuza noma imfucuza yezilwane.
Lokhu kusho ukuthi uma sibe ne-100 kg ye-mags bsf, i-200 Kg yemfucuza izophuma usuku ngalunye. Udoti olungasuswa luyi-waste, imfucuza, umquba wemfuyo kanye nokuthuthwa komuntu.
Izibonelo zeMaggot Yondla Imfucuza Yomzimba
Imfucuza yemakethe (imifino nezithelo)
Izibonelo ze-Maggot Feed Feed
Izibonelo ze-Maggot Feed Animal Litter
Umquba we-Rabbit umquba
Umquba wezinkomo zamahhashi
I-6. Hlanza ngaphandle kokuhogela
Njengezinyosi zezinkomo ngokuvamile zizobangela iphunga. Ngokungafani nenhlabathi ekhishwe yi-bsf maggot ayibangeli noma iyiphi iphunga.
Ukuvuza kwamagogane kuyizinhlamvu ezincane kakhulu njengesihlabathi noma ubukhulu be-maggot rectum.
I-7. Ungaphila ku-PH Extrem
I-BSf izibungu ziyazi ukuthi zinenkani kakhulu futhi zikwazi ukuhlala ph. Njengamahora amabili-amane okuphuza utshwala, usawoti, ama-acid kanye ne-ammonia.
Emakhazeni asebandayo noma uma kungekho ukudla okungukuthi i-BSF maggot izoba yingozi, ihlale ilele futhi ihlale ilele futhi izoqhubeka lapho izinga lokushisa lomoya libuyela ejwayelekile.
I-8. I-Rich in Nutrition and Protein High
I-BSF yemilingo iqukethe amaprotheni angu-40-56% amancane, i-30-36% ether, i-15-16% umlotha, i-4.9-5.2% calcium, ne-0.61-0.64% i-phosphorus ngendlela efomile.
I-BSf i-larva icebile izakhi, igcwele amino acid futhi iphrotheni ephakeme ngakho kuhle kakhulu ukunikeza njengokudla kwezilwane.
Izibonelo zezimvu zokudla izilwane
Zonke izinhlobo zezinhlanzi
Zonke izinhlobo zezinyoni
Zonke izinhlobo zamadada
I-9. I-BSF yabantu abalawulwa ngokwemvelo
Isilinganiso sobudala be-BSF siseduze ne-5-8 ngosuku futhi singafinyelela ngisho ne-14 ngosuku. Phakathi nesigaba sokuphila sezimpukane zanamuhla zikhiqiza ngokuxubha noma ukuxubha.
Ngemuva kokuqeda noma ukushada nesosha elimnyama lihamba ngezinyanga eziningi lizofa. Nakuba isosha elimnyama lishaya izinsikazi zizofa ngemva kokubeka amaqanda.
I-10. Ukukhula okusheshayo okukhulu kakhulu
Ngokuhlinzeka ngemfuyo ngendlela yemfucuza, imifino noma imfucuza, izibungu ezincane ezishayelwe ukuba zifinyelele esigabeni somdala zilinganiselwa ku-18 ngosuku.
Phakathi naleso sikhathi ngesonto lesibili umzimba omkhulu we-instar ukhula futhi ukhula ngo-15.000 ngobukhulu.
Ukukhula okusheshayo okukhulu kwezimpungushe kuletha izinzuzo zabalimi bamagogasi, okungavunwa futhi banikwe imfuyo emavikini amabili nje.
Abalimi abaningi banikeza ama-magots abo abaneminyaka engama-2 ngoba ukuthungwa kwalezi zibungu akulula futhi kuyathandwa kakhulu yizinhlanzi, izinkukhu kanye nezilwane ezinwabuzelayo.
I-11. Abakhiqizi abaningi base-Egg
I-BSF yesifazane ingafaka amaqanda phakathi kwamaqanda e-185 - 1.230. La maqanda afakwa ngokungaqondile phezu kokudla noma udoti kodwa phezulu kokudla.
Inani lamaqanda lilingana nobukhulu besisindo somzimba omdala. I-BSF yesifazane enesayizi enkulu yomzimba namaphiko avulekile kunomkhuba ophakeme wamaqanda okufanele uqhathaniswe nezimpukane ezinamagciwane amancane namaphiko amancane.
Ngemuva kwezinsuku ezimbili kuya kwezinsuku ezine la maqanda azogxila kwi-1 instar magot futhi akhule ukuze afake ku-6 phakathi kwamasonto amabili kuya kwamathathu.
Ezimweni lapho kukhona ukushisa okwanele nokushisa kwe-air phakathi kwe-25-35 ° C. Ubukhulu bezambatho ezishaqisiwe ziphathelene ne-2 mm, bese bukhula ku-5 mm. futhi ngemuva kokushintsha isikhumba sikhula ku-1,5-2 cm.
I-12. Ama-Maggot BSF Omnivores
I-BSF Maggot ingadla noma yini esidliwa ngabantu futhi ingakwazi ukudiliza imfucuza, imfucuza kanye nokudla ngokushesha.
Lokhu kube lula kwenza iMaggot BSF ikhiqizwe abantu abaningi emhlabeni. Enye indlela yokudla iyimthombo yokudla kanye nemithombo yezindaba etholakalayo kakhulu endaweni yethu futhi ingatholakala ngokukhululekile.
Ukunethezeka kokuthola umthombo wokudla we-maggot kuyinhlangano yabalimi abayithuthukisayo abangakhiqizwa ngezindleko eziphansi.
I-13. Asikho isidingo sezwe elide.
Ukukhiqiza umlenze ikakhulukazi umlingo njengezinhlanzi nezinkukhu zokudla akudingi umhlaba omkhulu. Singasebenzisa imoto yokupaka, eceleni nangemuva kwendlu ngosayizi wokuqala we-3x4 wamitha.
Ngisho noma usuvele uqeqeshiwe ekulimeni kwe-BSF umgogodla wesimanje, ungakwazi ukuwuhlakulela ekhaya njengomngane we-Yurie BSF edolobheni laseKebumen.
Kubalimi bezinhlanzi, izinkukhu kanye nezimbizane ze-bsf maggot zisetshenziselwa ukudla kwezilwane, futhi ngokuvamile zihanjiswa zibe izithako zokudla.
Isibonelo seMaggot ashintshiwe
I-14. Kulula futhi kuyasebenza
Ukukhiqiza umgogodla we-BSF kulula kakhulu, okwanele ukuhlinzeka ngotshani noma imfucuza ephilayo esitsheni bese uyifaka endaweni engabonakali ngqo emvuleni.
Ezinsukwini ezingakapheli i-BSF izimbiza zingavunwa futhi zinikezwe imfuyo. Indlela yokwahlula iyasebenza kakhulu.
Ngenxa yokuthi umgogodla we-BSF njengomuntu omdala uyophuma ngokwemithombo yezinto ezifayo ukuze aye endaweni emnyama neyomile (ukuzivuna) ukuzindla nokuguqula esigabeni se-pupa ngaphambi kokugcina ukugxila kumuntu omdala we-BSF fly.
I-15. Imithombo yamaprotheni evuselelekayo
Ukuqonda okujwayelekile komlenze kuwumthombo wamaprotheni ongavuselelwa masinyane ngokwemvelo.
Ukukhiqizwa kwemilenze noma ukulima umgogodla kuyindlela yokukhiqiza amaprotheni avuselelekayo okuwumphumela womsebenzi oqhubekayo wokukhiqiza umgogodla.
Lokhu kusho ukuthi i-BSF BSF nezimpukane zeMaggot zitholakala ngokwemvelo isikhathi eside kakhulu ngakho akukho sidingo sokudideka nokukhathazeka ngokuphuma kwezidingo.
Yingakho abalimi abanomdlandla benza umthambo njengomthombo wamaprotheni ezinhlanzi nezinkukhu zabo.
I-16. Ukuphakama kwekhalori
Umgogodla unamakholori aphezulu noma umthombo wamandla wokuthi uma udliwe yimfuyo yenza izinhlanzi noma izinkukhu zikhule ngokushesha.
Ngoba imisebenzi yemfuyo isekelwe amakholori adliwe kumaggot BSF. Ngokusho nje, ama-kilojoule angamandla adingekayo umzimba wezinhlanzi, izinkukhu kanye nezilwane ezinwabuzelayo kanye nabantu.
Ukukwazi ukuhamba nokufeza imisebenzi yomzimba ngendlela efanele ukuze umzimba unqabe ukuhlasela kwezifo.
Isibonelo, izidingo zekhalori ze-catfish ngokujwayelekile njengoba ezinkulu njenge-9,2 - 10,1% fat ukuhlangabezana nalezi zidingo zingatholakala kusuka magF BSF.
I-Maggot enokuqukethwe okune-fat 29,65 (Fahmi et el, 2007). Kodwa uma ibhekwa kusukela ohlangothini lobudala, umlenze unamaphesenti% wezinhlobo zokudla okunomsoco.
Usuku Lwempahla Emile (BK) Amaprotheni Amaqanda (PK) Amaqanda Amaqabunga Amaqabunga Amanzi
Ukubona okuqukethwe kwamanoni omgogodla ophakeme kakhulu kunezidingo zezinhlanzi (kwezinye izilwane sicela uhlole ukuze ungadli ngokweqile).
Khona-ke kungcono uma umgogodla we-BSF usetshenziswa njenge-pasta, ufulawa, izipelisi zamagogane nokunye okunjalo.
Ukucubungula lezi zimfutho zibe ngamalungiselelo ahlukahlukene ngaphezu kokugwema izakhi zomzimba ezingaphezu kwezezimali futhi zingaba nomthelela omubi emfuyweni. Kubuye kube yimfucuza.
I-17. Ukuthembisa Amathuba Ibhizinisi
Ukukhiqizwa kokudla kwezilwane unyaka nonyaka sekukhulile i-6,2% -8,1% ekukhiqizweni kokudla kwezilwane ze-2018 ivaliwe kumathani we-19,4 wezigidi zokudla.
Inani elikhulu lokudla kwezilwane kudinga ukwenza ukukhiqizwa kwemaggot kube nethuba elikhulu.
Inzuzo yabalimi bamaggot ukuthi yizishibhile kakhulu futhi cishe ikhululekile, ngisho nangokuhamba kwezinto zokuhamba, nazo zincane kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nokudla kwezilwane, izithako eziyisisekelo ufulawa wezinhlanzi ezingenisiwe kanye nezindleko eziphezulu ekuhanjisweni kwalezi zinto zokusetshenziswa.
Ukufunda Ngaphandle Kokuphunga
Ezingxenyeni ezihlukahlukene, abalimi abanamantombazane banganqoba, kepha ngokuqinisekile ukuhlinzeka ngokudla okunciphile futhi okunempilo kwezilwane, kudingeka bafunde indlela yokuhlakulela umlenze olungile ukuze kutholakale amaningi amaningi ngokuqhubekayo.
Futhi kufanele iqondwe kusukela ekuqaleni, iqala ngokutshala imaggot ngaphandle kokuhogela. Ukuze ibhizinisi lakho lemfuyo ye-Maggot libe ephephile futhi likhululekile ukuba lingabanjwanga umphakathi.
Ekuqaleni singangena la mathuba esikoleni esincane noma sasekhaya kuqala.
Ukwandisa ulwazi nesipiliyoni ngokuqinisekile kusenza sibe nesibindi sokuthuthukiswa kwebhizinisi kuya kakhulu.
I-18. Isimozulu sezulu sase-Indonesia
isimo sezulu se-monsoon
Isimo sezulu esishisayo futhi
Isimo sezulu seLwandle
Ngesimo sezulu esishisayo e-Indonesia, i-BSF (isosha elimnyama lizindiza) liyaphila futhi ikwazi ukuzala kahle.
Inzuzo yalesi simo sezulu esishisayo yilokho eyenza zonke izinqubo ze-Magfot BSF zanamuhla zingabikho iphunga:
Ukuhlakulela iMaggot ye-BSF yanamuhla ngaphandle kokunuka kwezinto ezishibhile
Isilimo samanje se-BSF umgogodla ngaphandle kokuhogela kalula
Ukutshalwa kwanamuhla kwe-BSF Maggot ngaphandle kokuhogela kuyinzuzo kakhulu
I-bsf yamanje yokulima umlimi ngaphandle kokunuka kwemiphumela esheshayo
Ukuhlakulela amaMaggots ngaphandle koHlaka oluphansi
Isimo sezulu esishisayo e-Indonesia sisiza abalimi ukuba banciphise umthwalo wokukhiqiza umlingo.
Uma kuqhathaniswa namanye amazwe anezinkathi ezimbili kuphela. Ukwenza isigubhu se-BSF sezindiza kuthatha amakhulu ezigidi zezimali nazo zonke izinto eziyinkimbinkimbi nokukhanyisa ukuze izinga lokushisa kumgqomo lizinzile.
Nakuba e-Indonesia akudingekile ngoba isimo sezulu e-Indonesia sizinzile. Ngakho ukwenza isigubhu ngokuqhathaniswa kwe-11-2, akudingeki usebenzise amakhulu ezinkulungwane zemali.
E-Indonesia ukwenza amathrekhi e-BSF anele ngemali engu-Rp500.000-Rp600.000.
Ukulima okulula okungahle kwenzeke
Ukukhiqiza i-maggot, esinye sezici okumelwe zilungiselelwe yimithombo yemvelo njengento eyisihloko yokwenza umgogodla.
Njengemfucuza ephilayo, imfucuza, umquba wemfuyo njll. Zonke izithako eziyisisekelo kulula kakhulu ukuthola. Kulula ukuthola izinto eziyisisekelo ukwenza iMaggot inzuzo eyengeziwe ukuqala ibhizinisi le-maggot elilula.
Futhi lezi zithako zitholakala kakhulu ngokuzungezile. Bheka nje inqwaba yemfucumfucu emakethe, emigwaqweni nasezindlini zokugcina umhlaba.
Ungasho ukuthi u-pulp udoti, amafutha omnqumo aphonswa ngumnikazi. Kubandakanya imfucuza yezilwane ehlakazekile futhi iphazamise imvelo ezungezile.
Ngokutholakala kwempahla yamagog, okwenza kube lula ukwenza ibhizinisi le-maggot.
Ukulima okungakahleleki okungaphezulu kwamaMoggots angenamsoco
Izindleko eziphansi zokutshalwa kwezimali okuqala kanye nokutholakala kokuthola izinto zokukhiqiza maggot kwenza ibhizinisi le-maggot lizuze.
Ngenxa yokuthi inhloko enkulu nje ingaqala futhi ukutholakala kwezinto ezibonakalayo okulula ukwenza kungenza izindleko zokukhiqiza nokuqhubeka kwebhizinisi kunenzuzo enkulu.
Ukuhlakulela okusheshayo kwe-Maggot Odorless Umphumela
Ukukhula kwamaggot BSF emazweni asezindaweni ezishisayo kufana kakhulu uma kuqhathaniswa namazwe angewona amahlathi.
I-Maggot BSf ezimweni ezishisayo ingavunwa ngo-18 ngosuku kuphela. Futhi ama-BSF amahlumela angabuye avunyiwe uma kuphela ngesonto elilodwa kuphela.
Isikhathi esincane ekukhiqizeni umgogodla esimweni sezulu esishisayo kusiza kakhulu abalimi ekuhlinzekeni ukudla ngokushesha futhi ngeshibhile.
Ngakho ukudla kwesilwane kudinga ukuthi kutholakale ngokwengeziwe.
I-19. Ukuthatha Amandla Kuyo yonke indawo
Ukukhiqiza i-maggot, kunemishini eminingi kanye nemishini okufanele inikezwe njenge-BSF drum, isitsha seqanda le-BSF, i-egg rack, ukukhuliswa kwe-biotong maggot njll.
Ukwenza izigubhu ze-BSF akudingeki ukuthi zisebenzisa izithako ezintsha, Ungenza amathrekhi e-BSF emthonjeni wemfucuza noma izinto ezingasetshenzisiwe njengezinkuni ezisetshenzisiwe, izinsimbi zensimbi kanye nesikhumba ekhaya.
Amakheji e-BSF akhiwe njengendawo yokuzalisa izimpukane ukuze angaqhubeki yonke indawo. Ngokuhlinzeka ngamagqabi e-BSF, ngokuqinisekile ukukhiqizwa kwamaqanda kungashintshwa njengoba kudingeka.
Iziqukathi zamaqanda we-BSF zingaba nezitsha, amabhakede, amathangi asetshenzisiwe, ukwethuka njll. Amaqanda amaqanda athathwa noma avuna kusuka kumabhodlela e-BSf abese echotshozwa kulezi ziqukathi.
Yikuphi okuhlelwe khona ukuze kulungiswe kangcono njengoba kulindeleke izidumbu.
I-BSF ye-Egg Rack
Ama-rack ama-BSF angenziwa njengento elula njengezinkuni, izinkumbi nezinye izinto zokudoba. I-Biotong njengesiqukathi sokwandiswa kwemagog enqubo ngemuva kokuthi amaqanda aqhekeke bese edluliselwa ekukhulisweni kwe-biotong.
I-Biotong ingenziwa nge-stacking rack systems ezifana nokwenza ama-rack earthworm. Hlela okuningi njengo-3 ku-4 ukubeka impahla.
Ngale ndlela ukutshala umgogodla kungakwandisa umhlaba omncane egaraji noma egcekeni lendlu yesikhashana.
I-Biotong nayo ingenziwa ngezinsimbi zamasenti ezihlanganisiwe njengokwenza amachibi ezinhlanzi kepha kuphela ukuphakama kwe-30 cm.
I-20. Ama-BRF amahhala namaqanda emvelo
Izimpukane ze-BSF zikhona yonke indawo e-Indonesia. Indlela yokuhlinzeka izithako ezisele ezisekhishini esitsheni, abalimi be-BSF bazofika babeke amaqanda ezigodini ezinikeziwe.
Ngaphandle kwekhishi lonke kunezinto eziningi ezingasetshenziswa uma nje izithako zifakiwe kwisigaba esiyingozi futhi azizona zinobuthi noma ziqukethe izibulala-zinambuzane.
I-21. Ukuphika Okumnyama Okumnyama Nokumvelo
I-BSF inezimpukane zendlu ezikhukhumezayo zezwi nezindwangu eziluhlaza. Ngakho ukuthi kumaphephandaba we-substrate esiwalungiselele ngeke kube khona ukuxuba nokuxubana nezinkukhu zezindlu kanye nezimpukane eziluhlaza.
Lokhu kubaluleke kangangokuthi imifula yethu yamaggot ayizinhlanzi ezimpukeni eziphethe izifo. Akukho phunga, ephephile futhi ekhululekile kulabo abahlakulela noma ezungezile imvelo.
I-22. I-Maggot BSF ingumngane wezilwane zezinkukhu
I-Maggot ibutho elimnyama lihamba linganciphisa kakhulu u-E. coli 0157: i-H7 ne-Salmonella enterica etholakala emqubeni wezinkukhu.
I-Maggot isosha elimnyama lihamba ngokushesha libulala ukungcola, amakhemikhali ayisishiyagalolunye angcolile kusukela emanzini amahora angu-24.
Isosha elimnyama lihamba ngokushesha liyanciphisa ivolumu kanye nesisindo sezinto ezizoshiswa. Ngendlela yamakoloni asezikhungweni abhidliza ukudla nokudala ukushisa, okwandisa ukukhuphuka komquba.
Amanani amakhulu abuye aguqulwe ku-carbon dioxide ekhishwa ngamagagots kanye nama-microorganisms e-symbiotic / mutualistic.
I-Larva emshinini womquba ngokuvamile inciphisa umthamo womquba cishe nge-50%. Futhi ingafinyelela ku-90% nge-BSF Modern Without Bau ukulimala indlela nge-Yurie BSF.
Ukusabalalisa kwe-BSF Izimpukane
Lezi zinhlobo ekuqaleni zitholakala ecotone ye-neotropical, kodwa emashumini eminyaka amuva nje isakaze kuwo wonke amazwekazi, iba cishe yonke indawo.
I-BSF ikhona emazweni amaningi aseYurophu, kuhlanganise ne-Peninsula yase-Iberia, eningizimu yeFrance, e-Italy, eCroatia, eMalta, e-Canary Islands naseSwitzerland.
I-BSF ingatholakala naku-Afrotropic ekozon, i-ekozon e-Australasia, i-Palaearctic ecozon, i-Nearctic ecozon, eNyakatho Afrika, ne-Ekozon Indomalayan sphere.
Izimpukane zezinsikazi ezindala zibeka amaqanda phakathi kwamaqanda e-185-1.235 ngesikhathi esisodwa. Lawa maqanda ngokuvamile agcinwa emifantwini noma phezulu phezulu noma eduze kwezinto eziphilayo ezifana nomquba noma umquba kanye nokugxila ezinsukwini ze-2-4.
Izimpungushe ezisanda kushaywa ziyi-intshi engu-0,04 (1 mm) ubude, ezikwazi ukufinyelela ku-1 amasentimitha (27 mm) ubude no-0,10 kuya ku-0,22 g ekupheleni kwesigaba sokuvuza.
Isigaba esivundile sihamba ngezinsuku ze-18-22, lapho isigaba sokuqala sithatha izinsuku ezingu-7. Ubude besiteji sokusila lungabambezeleka futhi lunwetshwe ezinyangeni ezimbalwa emazingeni okushisa aphansi noma ukuntuleka kokudla.
Isiteji se-cocoon sisuka ku-1 kuya kumaviki angu-2. Izimpukane ezindala zingaphila phakathi kwe-5 - izinsuku ezingu-8 uma zinikezwa uju noma ushukela we-java ngenkathi kuthunjwa noma isiphuzo sabo esiwuthandayo yi-nectar zasendle.
Izimpukane ezindala zihlala namafutha okuqoqwa okuqoqiwe ngesikhathi sesibindi.
Indiza ye-BSF inezingqinamba eziphelele ekuvuseleleni ubukhona bayo. Ukuguqulwa komzimba okuphelele kungumjikelezo wokuphila noma ukujikeleza kwezilwane ezithola izigaba ze-4 empilweni yazo.
Ngomjikelezo owodwa we-BSF uthatha phakathi kwezinsuku ze-40-44. Isikhathi sisekelwe ezintweni ezifana nokushisa kokunakekelwa nokudla.
Inhlanzi ye-BSF ihlukile ngoba emjikelezweni wayo wokuphila kunezigaba eziningi, okungukuthi isigaba se-5 kanje:
I-Adult / Imago Fly Phase
Isigaba sendiza enkulu noma i-imago yisiteji ngemuva kokuba inqubo ye-pupa igxume ekhanda layo. Kulesi sigaba se-BSF siphefumula singadli futhi siphuze kuphela ngesikhathi sokuphila kwabo.
I-BSF encane iqhuma futhi ivele iphuma emagobolondo abo kuphela phakathi kwamahora angu-12 izokhula kancane kancane ibe yizimpukane ezindala.
Izimpukane ezisanda kukhishwa zizophuma emgodini we-cocoon bese zihamba ziya phezulu ukuze zithole imithombo yelanga nokuphuza.
Isikhathi se-bsf fly fly omfushane kakhulu, okuphakathi kwezinsuku ezingu-5-8, lokhu kuthonywa yizici zesimo sezulu, umswakama nomthombo weziphuzo.
Ngemuva komuntu omdala ovuthiwe BSF fly uyobe ukuhlangana noma ukulingana. Izimpukane ze-BSF zinamandla okusebenza ngokuphumelelayo futhi ngesikhathi esifushane.
Isiphuzo esiwuthandayo se-BSF
Isiphuzo esiyintandokazi ye-BSF ngesikhukhula samanzi nesikhukhula sezinyosi zezimbali. Emgodini wokuthunjwa singaphinde sinikeze ushukela weJava njengengxenye yenyosi.
Ukwenza lokhu ngokuphalaza uketshezi kulo lonke igubhu.
Inqubo yokuxubha noma ukuxhuma umzali wesilisa uzosondela kumsikazi. Inqubo yokusondela ezifweni zezinsikazi ze-BSF zijikelezwa ezingeni elithile futhi zingezesikhashana.
Isikhundla sezindiza ezincane ekuqaleni sihamba ngendiza futhi sihamba emzimbeni wesifazane, sibhekene naso esifundeni esifanayo, kepha emaminithini ambalwa bese siphenduka futhi siphambene.
Kulesi sigaba sokushisa kwe-fly kuba isici esibaluleke kakhulu ekushiseni. Ukushisa okuhle kwezindiza ze-BSF kungukushisa kwe-30 ° C.
Nakuba i-BSF ayidingi ukudla ngesikhathi sayo sokuphila, kufanele isinike isiphuzo. Ukwelashwa ngokunikeza isiphuzo ngendlela yobusi ezindizeni kuzokwandisa ukukhiqizwa kweqanda.
Ukunikeza uju noma amanzi noma amanzi aseSwazini ashukela kunomthelela wokwandisa iminyaka yezimpukane.
Futhi kungabonakala enani lezinsuku zokwandiswa kokuphila kwezindiza nenani lezinsuku zokubeka amaqanda ngezinyosi.
Inombolo Yezinsuku Zokukhuliswa Kwezimpukane Ubudala
Usuku lwe-10-11 usuku oluphakeme lokufa kwe-BSF olunikezwa uju
Usuku lwe-5-8 usuku oluphakeme kakhulu lokufa kwe-BSF olunikezwe amanzi okuphuza
Inani lezinsuku zokubeka amaqanda ezindiza
Usuku lwe-5 usuku oluphakeme lokubeka amaqanda ngezinsizi ezinikezwa uju
Usuku lwe-7 usuku oluphakeme lokubeka amaqanda ngezinsizi ezinikezwa amanzi okuphuza
Isikhathi phakathi kwemizuzu engu-10-30 yi-BSF yesifazane yokubeka amaqanda. Ngenombolo ephakathi kwezinto ze-546-1.505.
Ubuningi bamaqanda we-BSF phakathi kwe-16,2-18,9 mg nesisindo ngeqanda ngalinye phakathi kwe-0,027-0,032 mg. Isikhathi esiphakeme ngokuvamile sibeka amaqanda phakathi kwe-11.00-15.00.
Izimpukane ze-BSF zamaqanda zibeka amaqanda kanye kuphela, futhi zifa amahora ambalwa kamuva.
Ama-BSF angaphezu kwabesifazane abesilisa
Izimpukane ezinkulu ze-BSF ezincane zivame ukukhiqiza amaqanda amaningi uma kuqhathaniswa nezimpukane zezinsikazi ezincane.
Amandla afanelekayo wokubeka ama-flyflies BSF ayenzeka kumswakama phakathi kwe-55-60%.
Izimpukane ezindala zizoshada futhi zenzeke ku-24 ° C (75 ° F) kuya ku-40 ° C (104 ° F) noma ngaphezulu. Mayelana ne-99,6% oviposition ensimini kwenzeka ku-27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F).
Izibani ze-Quartz-iodine ziye zasetshenziswa ngokuphumelelayo ukugqugquzela ukuxuba kwezimpukane ezindala. Ezimweni ezishisayo, ilanga eliqondile elikhanyayo ekuseni nakusasa ntambama lizokhuthaza i-BSF ukuba ibambisane futhi ibeke amaqanda.
Nakuba ukukhanya kwelanga okungaqondile kungcono kakhulu i-BSF ngaphambi nangemva kokuxubana.
Ukungcola ku-70% kubhekwa njengendlela efanele kuzo zonke izigaba zomjikelezo wayo wokuphila. I-substrate ngokusobala ayidingi ama-cocoons, kodwa i-substrate ibhekwa njengendlela yokulawula umswakama ovimbela ukuma.
I-93% yezinga lokubamba izindiza lapho umswakama ugcinwa ku-70%.
Ibutho elimnyama lishaya izibungu lingadliwa ngabantu. I-Larvae isebenza ngokuphumelelayo kakhulu ekushintsheni amaprotheni, aqukethe iphrotheni ye-56, i-calcium ecebile kanye nama-amino acids ephelele.
Emahoreni angu-432, i-1 yamaqanda amnyama ashisa amaqanda ashintshela ku-2,4 kg yamaprotheni, okusho okungaphezu kwamaqanda e-45.000 kumaqanda e-1. Ngakho-ke, zingaba umthombo wamaprotheni wokusetshenziswa komuntu.
Abakhiqizi amaprotheni, kodwa amaprotheni ashintshiwe angadliwa ngabantu abe ukudla okudliwayo.
I-taste maggot ukunambitheka kufana namazambane okuphekwe.
Isigaba seqanda senzeka ezinsukwini ze-2 - 4. Ukwahluka kwesikhathi okwenzekayo kubangelwa izinga lokushisa nomswakama obuseduze nemvelo yeqanda.
Ngokuvamile izinsikazi ze-BSF zezinsikazi zizofaka amaqanda azo endaweni emanzi futhi zibe nezinto eziningi ezibonakalayo zothando njengendlela yokuthanda izingane zabo uma ziqeda ngokuhamba kwesikhathi izingane zabo "azihluphekile" futhi zilambile.
Izibonelo zezindawo lapho amaqanda e-BSF abekwe ngumzali we-BSF
Isayithi lokulahlwa kwenkunkuma
Esikhathini seqanda, insikazi ye-BSF yezinsikazi izokhiqiza amaqanda amaningi phakathi kwamaqanda e-185 - 1.235 noma ngokuvamile ebizwa ngokuthi iqoqo.
Ukuma kweqanda le-BSF liwu-oval ngobude mayelana ne-0,7mm, uma ekuqaleni libekwa umzali wesifazane, la maqanda ahlanzekile amhlophe.
Futhi kancane kancane umbala uphendukela ophuzi wegolide. Ukuhlukanisa amaqanda aqokiwe noma cha, indlela yokuhlola noma ukubona amaqanda e-BSF.
Uma umbala ushintsha ukukhanya okubomvu (i-orange) futhi ukuma kwelungiselelo leqanda akusekho okuhle noma okuhle.
Ngakho-ke singaqiniseka ukuthi amaqanda aqoqe futhi aphenduke izimpungushe noma izimpethu noma ama-magot noma ugethe.
Imidiya yokufaka amaqanda e-BSF angabi nanoma yiluphi uhlobo lwezinto eziphilayo ezifana nodoti, udoti nomquba.
Izimpungushe ze-BSF zisetshenziselwa kakhulu ukwenza umquba noma ukuguqula imfucuza ibe ngondla yezilwane. Ukuvunwa kwe-Prepupae kunikezwa njengezinkukhu, izinhlanzi, izingulube, izimbulunga, ama-turkey, ama dragons kanye nezinja.
Izimpungushe ze-BSF zingesinye sezilwane eziphumelelayo kakhulu ekuguquleni ukudla ku-biomass. Ngaphandle kokukhiqiza kwamaprotheni, izimpungushe zezindiza nazo zikhiqiza ezinye izinsiza eziyigugu ezibizwa ngokuthi i-frass (i-kasgot / i-maggot esetshenzisiwe).
I-Kasgot iyi-okusanhlamvu ne-odorless okusalayo engasetshenziswa njengomanyolo ophilayo. Izimpungushe ze-BSF ngaphambi kokungena esigabeni somuntu omdala (prepupa) ngezikhungo eziyisithupha.
(Ingxoxo kulolu lwazi isetshenziswe zibe izigaba ezintathu ukusiza ukuqondisa nokuqonda emisebenzini yakho).
Lapho kulesi sigaba sangaphambilini ama-larvae ayasadli, futhi angenalutho okuqukethwe kwawo kwesisu, umlomo wabo uphenduka izingwegwe ezisetshenziselwa ukukhuphuka.
Isigaba sokuqala sokuqala
Isigaba sesibili nesesiqalo
Isigaba sesithathu sokuqala
Isigaba se-Instar I
Kulezi zikhathi zokuqala izimpungushe ezincane zizohambisa ngokuqinile emthonjeni wokudla. Lesi sigaba sokuqala se-Instar sezimpungushe sidinga kakhulu ukudla okuningi njengesithako senqubo yokukhula kwayo.
Ngemuva kwezinsuku ze-1 - 2, isigaba sokuqala se-instar sizokhishwa esikhumbeni bese ufaka isigaba sesibili se-instar.
Isigaba sesi-Instar II
Esikhathini sesibili sesi-instar phase, izibungu manje zinamazinga amakhulu kakhulu azungeze i-4-5mm, enezici ezifanayo njengesigaba sokuqala esisodwa kodwa sinomlomo omkhulu kunesigaba sokuqala esisodwa.
Kubonakala engxenyeni ye-spiracle yangaphakathi enesici esincane. Futhi ukuqala ukuphindaphinda kuba yisigaba sesithathu esisodwa esizobonakala ngaphezulu.
Esikhathini sesithathu se-instar phase, izimpungushe ziphakathi kwe-15mm noma kuncike kakhulu kunezinhlinzeko ezinikeziwe (ezitholakalayo).
Isigaba sesithathu sezimpungushe sesivele sine-cuticle futhi sishukumisela ngenkuthalo ukuthola indawo enomswakama futhi ivikelwe emvula futhi ilanga eliqondile lizokhula libe yi-pupa noma i-cocoon.
Isimo semvelo sokufuduka esetshenziswa ngaleso sikhathi ngumlimi we-maggot ukuze azivune i-prepupa ngokwayo.
Indlela yokuvuna ngokuzenzekelayo ngokunikeza isitsha se-biotong esinendlela yokuhamba noma ingahlinzeka ngesiteji esivumela i-prepupa ukuba ivuke kwi-biotong iphinde iwele endaweni yokuqoqa.
Ukushisa okungcono kakhulu kwezimpungushe ukukhula ngokushesha yi-30 ° C.
I-Maggot isosha elimnyama lihamba kakhulu linamandla futhi lingakwazi ukumelana nemibandela yokushisa ephezulu futhi ephakeme kunezibungu. Isosha elimnyama lishaya izibungu lingaphila ebusika.
Futhi isosha elimnyama livunguze izibungu zizobalekela uma inani labantu likhulu kakhulu, futhi ukushisa ngokweqile kuvela yizinyunyana ezincane kumathini okudoti noma umquba womquba.
Esigabeni sokuqala, izibungu zinezicubu eziphelele kakhulu ezikhulayo zibe izicubu ezivuthiwe.
Kuleli qembu lihlala ngezinsuku ze-7 kodwa liphinde lithonywe ukushisa endaweni ngayinye. Ukushisa kuphakathi kwe-26-33 ° C.
Esikhathini sokuqala kwesibindi izimpungushe zombala womzimba wezibungu ziphenduka abamnyama. Izinguquko zombala ezimpungeni njengezibonakaliso zezibungu zivuthiwe futhi zilungele ukuphenduka i-pupa noma i-cocoon.
Izimpungushe ze-BSF zezinsikazi ekukhuleni kwazo zingaphansi kwe-substrate noma ephakathi isikhathi eside kunezimpungushe zesilisa.
Isisindo Esiningi Se-Larvae Yamadoda
Futhi izibungu zesifazane zilinganisa kakhulu uma kuqhathaniswa nezibungu zesilisa. Esigabeni sokuqala, i-prepupa larva ishiya ama-media.
Funa indawo lapho isigodi sivikelwe khona ilangeni eliqondile kanye nemvula.
I-prepupa dialam ingatholakala kalula emaceleni amaqabunga, izinqwaba eziboshwe, izinqwaba zomquba wezilwane, izinqwaba ze-palm oil sludge nokunye.
Lokhu kwenziwa ukugwema izilwane ezinjengezinkukhu, inhlanzi, izinyoni, amadada, izinja, amagundane nokunye.
Kulezi zilwane (inyamazane) i-prepupa njengenkabi enomnandi futhi ephezulu emaprotheni. Lokhu kulungiswa empilweni yansuku zonke emphakathini kuvame ukubizwa ngokuthi imbewu noma ama-broods.
Uma unenkinga yokuthola i-prepupa emvelweni. Okunye ukuthenga kusuka kumalimi abenza amagagasi.
Ikhwalithi ye-Prepupa ayifani
I-Maggot yisilwane sama-omnivorous, okusho ukuthi sidle noma yini uma nje isigaba sokwemvelo.
Ukunikeza ukudla noma ukondla izibungu kusukela ukuhlwanyela ukukhula kube yinto enamandla kakhulu emthonjeni we-prepupa.
Ngaphezu kwalokho, lezo zilungiselela zizosetshenziselwa ukuba abalimi bahlonywe futhi.
Uma ukunikezwa okunikezwayo kuphela ngesimo sodoti noma umquba wemfuyo noma umshini, impela lolu hlobo lwe-prepupa luzoba ngekhwalithi ephansi njengokungenelela.
Lolu hlobo lwe-prepupa lungcono kuphela uma lusetshenziswa njengezinto eziguqulwe ngamagog. Akusizo izibopho ezizosetshenziselwa ukulima kabusha.
Ukuhlinzekwa kokudla okuluhlaza okungekho okwenziwe ngekhanda kuzokwenza ukuthi i-prepupa ihlupheke ngenxa yokuntuleka komsoco futhi ingasetshenziswa njengezintambo.
Abalimi bamaggot abangaqondi futhi banikeze ukudla okukhiphayo futhi bayithengise njengama-brooders bazolimaza.
Empeleni lokhu kungenxa yokuthi abaqondi. futhi kuphela okuhloswe ukunciphisa izindleko zokunakekelwa kuze kube sekuthengiswa impahla.
Kodwa kulabo abafuna ukuhlakulela nokuhlakulela i-BSF, akukhuthazwa ukuba uqale ukulima imaggot ngokuthenga imbewu engenandaba.
Ngoba u-brood oyoyithenga uyalinywa futhi. Ukulima kwemaggot okugxile ekuthengiseni imikhiqizo yezinkomo zeMaggot kumele iqonde ukuthi ingahlakulela kanjani umsebenzi.
Ngoba ngokuyinhloko uMaggot unomlingisi "umthamo wesisu".
Iyini umthwalo wokuKhutha?
I-Gut load yinkqubo lapho izilwane zikhuliswe khona futhi zondliwa ukudla okunomsoco ukuze zinike lezi zakhi ezilwaneni ezibaphangi.
Leli gama livame ukusetshenziselwa ngokuphathelene nokulungiselela umlenze osetshenziselwa umuthi wokuhlakulela kabusha.
Ama-Maggots aphakanyiswa ngezohwebo ukuze uthole ukuhweba kwezilwane kufanele abe nenani eliphelele lokudla okunomsoco.
Ngokunikeza izibungu zokudla eziphakeme ngaphambi kokuthi zenziwe zibe yiziqu ezincane, i-prepupa izoba nekhwalithi enhle njenge-brood. Ngokuphambene nalokho.
Ukugaya umthwalo ngokuvamile kwenziwa ngokunikeza izithelo, imifino, kanye nezitshalo noma ukudla okufakelwa ukudla okuphephile.
Ezinye imikhiqizo yezohwebo zitholakalayo futhi ziqiniswa ngokuqondile emithwalweni yemithwalo efana noM M kathathu noma iMedia Media Maggot.
Imikhiqizo ye-Triple noma i-3 M isivele inezinhlanganisela zama-carbohydrate, amafutha, amaprotheni, amavithamini, amaminerali kanye ne-fiber yokudla.
Esigabeni se-pupa noma se-cocoon, yisigaba lapho ama-pupee angcono kakhulu anomsoco. I-pupa yesifazane (i-cocoon) isisindo phakathi kwe-10% -15% esinde kunamadoda.
Zingagcinwa ekamelweni lokushisa amasonto ambalwa, futhi uma ufuna ukunweba impilo ye-pupa, ungawagcina ekushiseni kwe-10-16 ° C.
Indlela yokubamba umlingo noma umuthi we-pupa ungalungiswa kwisitsha bese unikezwa abezindaba njengengubo.
Okulandelayo ukuqhathaniswa kwezinsizakalo ezinhlanu ezisetshenziswe njengama-blanket e-pupa. okungukuthi angasebenzisi i-substrate, ishlabathi, inhlabathi ye-humus, i-sawdust.
I-Pupa enhlabathini kanye ne-sawdust substrate isheshe kunomhlabathi noma i-sawdust. I-hatch esheshayo yi-pupa enganikezwa ingubo (substrate)
Ukushisa, i-BSF ehamba phambili imjikelezo yokuphila phakathi kwezinsuku ezingu-8-11 no-29-30 ° C. Ukuthuthukiswa kwamaqanda amakhulu emazingeni okushisa ngenhla kwe-30 ° C.
Ukudla, Inani kanye nokuthuthukiswa kwamaqanda ahambayo kuthonywa kakhulu ngekhwalithi yesondlo esinikeziwe. Okuqukethwe okunomsoco okungaphezulu kokudla, kakhulu i-BSF Lalt. Ngokuphambene nalokho. Amagogotshi angenalutho angaphumeleki noma umphumela ovamile amaqanda amancane kakhulu
Ukukhanya, ukukhanya okubalulekile kubalulekile ekuthuthukiseni izimpukane ze-BSF. I-BSF ithanda izindawo ezikhanyayo
Imidiya, iMidiya enezinto ezinomsoco ophezulu kakhulu ngokulingana nekhwalithi yemaggot. Imithombo yezindaba engcono kakhulu njenge-M kathathu (i-maggot media magic), ikhekhe lamafutha we-palm (PKM).
Ama-BSF ahlukene ne-BSF wesifazane
Izimpukane zomzimba zomzimba zincane
Izimpukane zamaphiko ezincane zifushane
Isisu sesidumbu se-3 esiswini, ne-6 kubesifazane
Isisu yisilisa esilungile nesifazane oqondile
Abesilisa abanalo ubulili besilisa besilisa
Izinkinga zokulima umgogodla
Inkinga enkulu ekwakheni ukulima kwe-BSF yi-BAU. Naka izindlela zokulima ezilungile nokulungile kusukela ekuqaleni.
Uma ukulima kwakho kwemaggot kuhogela, lokhu kuyinkinga enkulu. Ngaphandle kokungakhathazeki ngoba iphunga lingabuye limeme izidumbu kanye nezinambuzane ezifana namagundane, izimpukane eziluhlaza, izinyoka, izinyoka.
Ngaphandle kwenkathazo, isongo esikhulu sokulima umlingo ngumbukiso womndeni kanye nemvelo. Kube khona abalimi abaningi abanamagatsha abaphoqelelwe ukuvala ngenxa yephunga elibangelwa amapulazi abo.
I-2. Imiphumela Encane
Ezinye izinkinga ezinkulu kukhona isivuno esincane sephasta futhi asiqinisekisiwe ukutholakala okuqhubekayo.
Ukujikeleza komjikelezo wokukhiqiza umgogodla kudinga ukuhlinzeka ngezibungu ze-BSF noma amaqanda aqhubeka ekhona.
Isixazululo ukwakha amakoloni e-BSF avela emvelweni njengekuhlinzekwa okuqhubekayo kwamaqanda ngokuwadoba usebenzisa ithuluzi elinjenge-biotong.
Ukuheha amaqanda ama-BSF angasebenzisa izingcezu zekhadibhodi, amaqabunga asebhanana omisiwe noma ibhodi ye-infra ezithengiswa ezitolo zokuthenga noma amakhophi.
Isosha elimnyama liyahamba kahle ngonyaka wonke emazweni ashisayo noma asezindaweni ezishisayo, kodwa kwezinye izindawo, izithombo zokugcina izodingeka ukuze uthole amaqanda ezinkathini ezipholile.
Ngakho-ke siyi-Indonesia uma sisebenza futhi sikhuthele, akudingeki sikhathazeke ngale nkinga.
I-3. Ukukhetha okungalungile
Akulungile ekukhetheni uhlobo lwe-fly ne-maggot. Amantombazane amaningi ahlwanyelwe yizimpukane eziluhlaza. Lokhu kumele kulungiswe ngokushesha.
Ngenxa yokuthi izimpukane okufanele zihlonywe zivela e-black soldier fly esikhundleni sezimpukane eziluhlaza eziphethwe yizifo eziwumshayabhuqe.
Uma uphoqelekile ukuthenga imbewu, uthenge imbewu ephakeme ye-BSF yamaggot ukuze imiphumela iyanelisekile. Thenga imbewu ephakeme yamaggot impilo yonke.
Uma uthenga imbewu ngokungahleliwe imiphumela ayiqinisekisiwe futhi ekugcineni kufanele uthenge futhi uthenge futhi.
Ungathengi amaqanda e-BSF athengiswa ngamagremu. Udinga ukwazi amaqanda we-BSF athengiswa ngegramu ngayinye kusho ukuthi uthenga amaqanda aphukile ngoba "ahlutshiwe" avela endaweni avela kuyo.
Amaqanda we-BSF aqoshiwe azophulwa. Ngakho-ke uthenga amaqanda aphukile futhi ngeke uchithe.
Ungakhulumi lapho ukupakisha la maqanda unamathele ngokunganaki okwenza amaqanda e-BSF aphule futhi ngeke aphule.
Umthengisi wamaqanda e-bsf kerok ubonakala engumchwepheshe ongcono kunoBrece Lee owaziwayo ongakwazi ukukhipha amaqanda ngaphandle kokuphulwa.
Isixazululo ukuthenga amaqanda e-BSF nge "cluster" ngayinye eqhubekayo ngokuqondile njengoba isimo sezintambo ezindizayo sibeka amaqanda abo.
Lokhu ukuqinisekisa ukuthi amaqanda aqinile futhi awaphuli ukuze lonke iqanda lithengwe esikhundleni samaqanda aphukile.
I-4. Ifomula engalungile
Ingabe uhlelo lokusebenza lokudla olufanele ngenhloso yokulondoloza i-83%.
Ukufeza lokhu, kudingeka sifunde indlela yokugubha i-maggot ekutheni kusetshenzwe izinhlanzi nezinkukhu ezinkukhu okuyiyona ndlela efanele.
I-5. I-Maggot Yokuthengisa Edidekile
Ufuna ukuyithengisa kuphi i-maggot-maggot lapho ukunikezela kokudla kwakho kugcwalisiwe. Ufuna ukuyithengisa kuphi i-maggot?
Isixazululo sale nkinga empeleni kulula, udinga nje ukwandisa ibhizinisi lezinhlanzi noma lezinkukhu.
Kodwa uma ungeke ngenxa yezizathu ezithile, kufanele uqale ukucabanga ukuthi ungayithengisa yini i-maggot?
Isixazululo kulula, thengisa umuthi wakho ku-Yurie BSF, okwamanje uthola umgog ngentengo ka-Rp7.000 ngekg.
Leli xabiso liphakeme kakhulu ngaphezu kwemakethe elizungeze i-Rp4.000-Rp5.000 ngekg.
U-Yurie BSF uthengisa ngentengo ephezulu ye-maggot yakho ngoba siyidinga ukuba isetshenziswe ekuhlinzekeni kwezilwane futhi isakazwe kwamanye amadolobha we-99 e-Indonesia.
Uma unesithakazelo ekusebenzeni ngqo epulazini eliseduzane le-mggot edolobheni lakho, ungabheka ikheli kule sayithi noma ushayele ngqo kuNksz Yurie ku-0812-2105-2808.
Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi we-maggot. Ngokwemvelo, uma okokuqala ucabanga nje ngokukhiqiza i-maggot.
Ekuqaleni, ihlose ukunciphisa izindleko zokudla kwesilwane. Njengoba isikhathi siqhubeka, amakhono akho azokhula futhi izitshalo eziningi zemigodi nazo ziyovunwa.
Kwabanye abantu, ngokuqinisekile badinga usizo lokuqhubeka nokuthuthukisa. Ngakho-ke u-Yurie BSF uthola uhlelo lokunikeza usizo kubo bonke abangani baka-Yurie BSF be-Rp100.000.000 ngomuntu futhi ngokuqinisekile bahambisana nezidingo zebhizinisi.
Imfuneko yokwamukela le mali yikuthi kufanele uthengise umgogodla ku-Yurie BSF. Lo mnikelo kufanele ubuyiswe ngokuthumela i-maggot-maggot ku-Yurie BSF.
Inani lembuyiselo ayikho ngaphansi kwesithakazelo nhlobo. Asimukeli i-RIBA. Kungakhathaliseki ukuthi kunani usizo losizo esikuhlinzekayo, akukho ukukhishwa kwezokuphatha.
Khona-ke futhi ukhokha lelo xabiso nge-Maggot.
Umphathi wezinsimu oqinisekisa ukuthi ukulima kwakho kuphumelele. Ukuqondiswa kwendawo kubaluleke kakhulu ngoba izinkinga obhekana nazo nsuku zonke "zifana" nezinkinga zabalimi kwezinye izindawo.
Yilapho uhlelo lweDUTA YURIE BSF ludlala epulazini lakho. Nikeza isiqondiso esiqondile ngokuhambisana nesimo nezimo.
Ngalolu hlelo lwe-ambassador ye-Yurie BSF, ngeke ube yedwa. KANYE SIPHUMA NGAKHO ngokuthatha izifundo lapho sibonga kakhulu ukusiza abanye khona-ke impumelelo kumele ifike.
I-8. Ayikho i-guarantor
Lokho esikushoyo kuyisiqondiso kuze kufike ukutshalwa kwegaggot uphumelela ngempela.
Izinkulungwane ze-Yurie BSF abangane kusukela beyazi ukuthi i-2007 isengaphansi kuka-Yurie BSF. AKUNYE IZINDLELA ZE-RUPIAH EZIYINYE.
Akuyona yini ukulahlekelwa?
Yebo cha, isimiso sethu siyimpumelelo ndawonye.Uma umngane omkhulu kaYuroe uphumelela ngempela, imiphumela ye-maggot izothengiswa ku-Yurie BSF. Kusho ukuthi sidinga omunye nomunye.
I-9. Imakethe Emfushane
Ungahlinzeka kanjani ngokudla kwezilwane futhi ube yingxenye yemakethe kazwelonke? Izidingo zokudla kwezilwane ze-2019 zilinganiswa ukuthi zingaphezulu kwamathani ayizigidi ezingu-20-21 zokudla kwezilwane. Ithuba elihle kakhulu lebhizinisi.
Abafuyi bezinambuzane bavame ukuthola izibungu endaweni yezibungu zabo. I-Larvae yiyona engcono kakhulu ekuguquleni imfucuza "enomsoco kakhulu" ekufakeni izilwane.
Imifino ingcono ekuguquleni izinto eziphezulu ze-cellulose (iphepha, amakhadibhodi, amaqabunga, izinto zokutshala ngaphandle kwezinkuni) zibe izichibiyelo ezinhle zenhlabathi.
Imifino yemifino ikhula kahle ezinsaleleni ezikhiqizwa izimpungushe ezindizayo, kodwa izikhukhula ezinamanzi ziqukethe ama-enzyme futhi zivame ukuba ziqinile kakhulu ezimpethu.
Umsebenzi we-Larval ungagcina izinga lokushisa elizungeze i-37 ° C (100 ° F), kuyilapho izibungu zidinga amazinga okushisa apholile.
Iningi lemizamo yokwandisa inani elikhulu lezibungu ngezimpethu kwisitsha esifanayo, ngesikhathi esifanayo asiphumelelanga.
Izinambuzane zingaphila ngaphansi kwesilazi lapho phansi kunomhlabathi. Izinambuzane zingaphila enqoleni yokudakayo lapho iningi lama-larva lingekho.
Izinambuzane zinganezelwa uma abantu abavunguzayo behlehla (ebusika) kanti izimpethu zingakhulelwa enqoleni yokudakayo ngenkathi zilinde amaqanda ezimpukane zasebusika zasendle.
Njengokudla, izimpungushe ze-BSF aziwa njengezimpikiswano zokwabelana ngezimpethu eziphazamisayo ezihlasela izinyoni, kuyilapho izibungu ezibomvu zingabantu abaningi bemfuyo.
Izifo zeMaggot ze-BSF
ENtshonalanga Afrika, i-Dirhinus giffardii itholakale njenge-parasitoid evela ku-pupa H. ihlukumeza futhi inciphisa ukukhiqizwa kwamaqanda.
Okubangela ekunciphiseni isamba kuze kufike ku-72%. Lezi zinambuzane ezithathwa yizinyosi kanye nezinyathelo zokuqapha kufanele zithathwe ukuze zivikele indawo yokukhulisa izibungu kusukela ekuhlaselweni kwe-wasp.
Kunezindlela eziningi zokuhlakulela umlingo. Abezindaba abahlukahlukene bangasetshenziselwa ukukhiqiza izibungu ezinjengotshwala, imfucuza kanye nomquba.
Noma yimaphi abezindaba asetshenzisiwe, khetha imidiya elula ukuthola futhi "ekhululekile".
Akunconywa ukusebenzisa imidiya ngokuthenga njengokusebenzisa ibhulogi.
Ukulima kwe-maggot media maggot ngaphezu kwegaggot eliyigugu elikhiqizwayo libuye liphansi. Ngoba okuqukethwe okunomsoco ku-bran kuncane.
Izinhlobo Zokukhiqizwa KweMaggot Media
Ukuhlakulela iMedia Magnet Media Media
Ukuhlakulela i-Maggot ye-Waste Media
Ukulima amaMaggot wezilwane
Enye indlela yokuhlakulela umlingo ngokusebenzisa umquba wemfuyo.
Ukulima umgogodla ngemfucumfucu yemfuyo kuyindlela enhle yokukhiqiza ama-maggot amaningi ngezindleko eziphansi.
Yimuphi umquba wezilwane ongasetshenziswa njengendlela yokulima umlenze.
Empeleni, wonke umquba wezilwane ungasetshenziswa njengemidiya yokulima imilenze. Ngakho-ke asikho isizathu sokuthenga imidiya yokulima engaphansi komhlaba.
Izibonelo zomquba wezindaba zokulima umlingo
Ukulima umgogodla kanye nemidiya evela kumfucuza we-tofu wamagundane, noma imfucumfucu yesundu kunconywa kakhulu ngoba ngaphezu kokukhiqiza izimbungulu ezinhle zekhwalithi.
Kanye nokuba yisisombululo sokungcola kwe-tofu waste eyenziwa emfuleni.
Ngokufanayo nangotshani wamafutha omuthi wesundu ongazange asetshenziswe futhi uphonswe endaweni ye-oli palm plant. Nakuba udaka lwesinkwa samafutha luhle kakhulu njengendlela yokulima imifino.
Izibonelo zemfucuza yemidiya yokulima umlingo
Ikhekhe le-Palm Oil
Imfucuza ye-Organic yinkinga yemvelo yamanje, futhi ihlanganisa yonke indawo. Kungaba yisimanje sokulima umlingo.
Ukulima umgogodla nge-waste media kuphakanyiswa kakhulu ngoba imiphumela ihle futhi insiza ngokungazi ekuxazululeni izinkinga zokudoba.
Inkinga yotshwala yinkinga yomhlaba, hhayi kuphela e-Indonesia.
Kuba into eyaziqhenya kakhulu uma singenye yezingxenye ezincane zokusiza ukuxazulula inkinga yenkinga ngokusebenzisa le nkunkuma endaweni yemidiya ekulimeni kwemaggot.
Imikhiqizo Yokukhiqiza Amaggot
Ekulimiseni umlenze okungenani sizokhiqiza imikhiqizo etholakala ngendlela
I-Bekas Maggot (KasGot)
I-KasGot (i-maggot yangaphambili) incane (njengesihlabathi) ukungcola kusuka kumaggot ubukhulu bokuvuleka komlenze wesilwane. I-KasGot ivela ekudleni okungokwemvelo okudliwa amagaggot futhi iphonswe emgqeni we-maggot.
Le nqubo ibizwa ngokuthi i-vermicomposting. Ikhwalithi yesikhalazo sincike kakhulu kumaphethini wokugcina maggot. I-Kasgot ayixhomekile kuhlobo lwezinto eziphilayo ezidlayo.
I-Kasgot iqukethe izakhi ezincane namancane kanye namavithamini. I-Kasgot inhle kakhulu ekuthuthukiseni izakhi zomhlabathi, ukukhula nokukhiqizwa kwezitshalo nezitshalo.
Umanyolo womngane uqukethe eminye imisebenzi ekhuthaza ukukhula kwezimpande zezitshalo. Futhi lena yizindaba ezinhle kubalimi ngoba kuye kwafakazelwa ukuthi kuyaphumelela kakhulu ekuthuthukiseni izinga lokukhiqiza izitshalo nezitshalo zezithelo.
I-Kasgot icebile ezakhiweni ze-Hara
I-Kasgot ekhiqizwa inqubo ye-metabolic ye-maggot yomzimba noma i-vermicompost icebile kakhulu ezakhiweni ezidingekayo ukuze kukhule umhlabathi.
I-Kasgot iqukethe izakhi eziphelele (macro and micro chemistry). Esikhathini senqubo yokuqhaqhazela, sekuye kwaphindwa kabili inqubo yokudiliza yendaba ephilayo.
Okokuqala, inqubo ebalulekile yebhaktheriya ngaphambi kokudla umlingo. Okwesibili, inqubo yi-maggot ngokwayo, okuyinto lapho indaba ephilayo isesiswini semaggot.
Yikuphi okwehliswayo ngokusebenzisa izinqubo zamathambo. Ngakho-ke, i-maggot iyatiwa njenge-bio engalungile injini.
Izakhi zamakhemikhali e-cassava zikulungele ukuba zithathwe yizitshalo kanye ne-cassava equkethe ama-microbes nokukhula kwezitshalo ezikhuthaza ama-hormone, ngakho zingasiza ekukhuleni kwesitshalo ngokushesha.
Inqwaba yezinhlamvu ezincane ezitholakala emanzini yenza ukusheshisa ukukhululwa kwezakhi ezifomeni ezidinga izitshalo.
Ukuqhathaniswa kweN, P, K POC KasGot (Maggot asetshenzisiwe)
1 I-Kasgot 1,50 4,11 1,22
2 Ukushaya 1,38 4,23 1,22
3 Umquba wenkomo 0,96 0,68 1,68
4 Umquba wamahhashi 0,49 0,73 0,83
5 Inkukhu yomquba 2,72 6,32 2,03
7 Umquba wembuzi 0,61 0,31 0,18
8 Umquba wegayi 1,24 1,83 0,74
Okuqukethwe komanyolo we-Organic Kasgot
Okuqukethwe komgogodla kuncike emthonjeni wesondlo onikwe amagaggot.
Ukudla okunhlobonhlobo okuhlukile, izakhi ezihlukahlukene kakhulu zokudla okunomsoco ekukhoneni. Kodwa ngokujwayelekile okuqukethwe komsoco we-kasgotter kanje:
I-nitrogen (N) i-0,63%
I-Phosphorus (P) i-0,35%
I-Potassium (K) i-0,20%
I-Calcium (Ca) i-0,23%
I-Magnesium (Mg) i-0,26%
I-Sodium (Na) i-0,07%
I-Copper (Cu) i-17,58%
I-Zinc (Zn) i-0,007%
I-Manganium (Mn) i-0,003%
I-Iron (Fe) i-0,79%
I-Boron (B) 0,21%
I-Molybdenum (Mo) i-14,48%
I-TK 35,80 meg / 100mg
I-41,23% namandla okulondoloza amanzi
13,88% i-humus acid
Izinzuzo ze-Fertilizer engasetshenzisiwe
Kuyinto engabizi ngoba izithako ezenza umanyolo ongapheli yizinto eziphilayo ezizungezile.
I-Cashmere Umanyolo ayilimazi inhlabathi ngoba ayinakho amakhemikhali. Lokhu kwenza umquba womanyolo ungasetshenziswa njalo futhi ungabangeli imiphumela embi emihlabathini noma izitshalo.
Ukulahlekelwa Umanyolo Wama Kasgot
Ukusebenza kwezitshalo akuzona ngokushesha njengoba umanyolo engavamile. Ngoba umquba womanyolo wenziwa ngokwemvelo.
Siza ukukhula kwezitshalo nezitshalo zokukhiqiza izitshalo zokuhlobisa, imifino nezithelo. Isiza ukuthuthukisa ukubonakala kwezitshalo kube okungajwayelekile.
Umbala webala, ukuthungwa nokuhlelwa kokuhle kungcono. I-Kasgot inhle kakhulu njengengxube yemidiya ekhulayo e-nursery.
Iqukethe ama-hormone ukuthuthukisa izakhiwo zomzimba, amakhemikhali nama-biological. Iphephile ukusebenzisa isikhathi eside ngoba ngaphandle kwamakhemikhali.
Isilinganiso Sokusetshenziswa Kwamafomishi Ase Kasgot
Umanyolo ongenasongo wommbizi we-1kg oxubene nomhlabathi we-3kg, ngenkathi umhlaba omkhulu 6-10 kg ushaqa wonke ama-10m2
Ubukhulu be-cassava buxhomeke kulohlobo lwesitshalo kanye nezinga lokuzala kwenhlabathi okufanele ikhule.
Umanyolo we-Organic Umququzi wamanzi
Inzuzo ye-maggot yemanyolo ephilayo (POC) ukuthi ine-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium nokuqukethwe kwamanzi amaningi, iqukethe ukugqugquzela ukukhula futhi ingavimbela ukufika kwezinambuzane ezihlukahlukene zezitshalo.
Imvelo kanye nezici ze-fertilizer ephilayo
Umquba wamanzi omanyolo kufanele ube ngaphezu kwalokho. Ngenxa yokuthi izakhamuzi zizogcinwa isikhathi esiningi kumaphephandaba, sebenzisa isikhalazo esiqinile.
Ngenkathi ukudla okunomsoco omanyolo we-maggot okuketshezi kakhudlwana kunomthelela wokukhukhula kwamanzi futhi kuqhuma.
Kodwa kunezinzuzo ezihlukile uma usebenzisa i-POC maggot okulula ukugaya ngamaqabunga nezitshalo zezithelo futhi usebenza njengomgqugquzeli wezithelo nokukhula kwembewu.
Ikakhulu lapho amaqabunga nezithelo ziqala ukuhluma. I-Maggot POC inhle ngoba ingafakwa ngokuqondile nge-stomata noma ama-pores.
Ukunikeza i-POC Maggot kufanele inake umthamo ukuze ungadli ngokweqile futhi ubangele ukufa ezitshalweni.
Izitshalo ngokwesilinganiso zingakwazi ukuthola izakhi ezingaphezu kuka-2% ngosuku.
Isilinganiso sokusetshenziswa kwe-POC Maggot
Engeza i-POC ngamanzi ahlanzekile. Ngemuva kokuxuba le-spray yamanzi, ukuhlushwa akukona okungaphezulu kuka-2% noma kuwo wonke ama-1 ilitha le-POC umqubuthe ohlanganiswe namalitha amanzi angu-100.
Phonsa ngesikhathi sokushintshwa kwesigaba kusuka ekutshalweni kwezitshalo ezikhiqiza izithelo, imbewu noma izilimo eziyizigaxa.
Hlela ukuphathwa kwe-POC maggot kanye ngesonto ngenkathi eyomile. Uma isizini siqala, funa zonke i-3 kanye ngosuku ngoba i-POC idonswa ngamanzi emvula.
Umthamo we-POC maggot kufanele ulungiswe kuhlobo lwesitshalo okufanele lunikezwe i-POC maggot.
Isivuno ngesimo se-prepupa noma izimpungushe zamagagasi kufanele kusetshenziswe kuqala kumalungiselelo ahlukahlukene.
Lokhu ngaphezu kokukhulisa isivuno kungabuye kugcinwe isikhathi eside. Futhi isetshenziswe uma kudingeka.
Okuphakelayo kwezilwane ze-Maggot
Ingabe i-Maggot ingasetshenziselwa ukudla kwezilwane? Omunye wezakhi ezitholakala emaggot isiprotheni,
Futhi le phrotheni iyadingeka yizo zonke izilwane ngisho nabantu. Ngakho yiziphi izilwane ezinganikwa i-maggot. Impendulo yonke imfuyo edinga amaprotheni ezinkomo.
Kungokuthi amazinga amaprotheni adingekayo yisilwane ngasinye ahlukile. Ngakho-ke isisombululo ukucubungula i-maggot kumalungiselelo ahlukahlukene kuqala.
Yimaphi amaprotheni amazinga alawulwa ngokwezidingo zemfuyo.
I-Maggot iyinhle ekudleni kwezinyoni
Izinyoni ze-Bird Cucak
Izinyoni Ezikhukhulayo I-Cucak Swamp
I-Bird Chirping Starling Suren
I-Murai Batu Bird
I-Burung Panca Warna
I-Maggot ikulungele ukudla kwe-inkukhu yase-Bangkok
I-Wido inkukhu noma i-Jalak
Umgogodla Omuhle Wokudla Kwezilwane Zezinkukhu Zokuhlobisa
I-Ayam Batik (Sebright)
I-Grey Forest Inkukhu
I-Red Forest Chicken
I-Sri Lanka Forest Chicken
Inkukhu ye-Cotton (Silkie Hen)
I-Ayam Yemidlalo Ye-Modern Bantam
I-Plymouth Rock Chicken
Inkukhu yasePoland noma iPoland
I-Maggot Efanele Ye-Kampung Chicken Animal Feed
Dan Jantun Inkukhu
Umgogodla omuhle wokudla kwezilwane ze-Broiler
Inkukhu yaseBlack Brown
Inkukhu Yenkukhu Yomkhuhlane
Inkukhu yaseGibhithe Fayoumi
Izinkukhu Zenkululeko Yenkukhu
I-Giant Jersey Inkukhu
Inkukhu ye-Turken (i-Naked Neck)
I-Maggot ikulungele ukondla inkukhu
Inkukhu Buff Orpington
Inkukhu yasePlymouth Rock / iRedred Rock
I-Rhode Island Inkukhu Ebomvu
I-Maggot Ekulungele Ukudla Ukudla Kwe-Catfish
I-Dumbo Catfish Imfuyo
I-Pearl Catfish Imfuyo
I-Sangkuriang Catfish Imfuyo
I-Maggot ikulungele ukudlala i-tilapia
I-Black Tilapia 69
I-Maggot Elihle Yokudla Kwezinkomo Zomkhumbi
I-Cork Channa Barca
Isikhumba Channa Bleheri
I-Cork Channa Diplogramma
I-micropelte yeCork Channa
Ingulube Channa Pleuro
I-Maggot Elihle Ngesidlo Sokudla Kwezilwane
Imfuyo yaseDagelang yaseDuck
Imfuyo yaseDegal yaseDuck
I-Albino Duck Cattle
I-Tiktok Duck Cattle
I-Alabio Duck Cattle
Izinkomo zezinkabi ze-Mojosari
Inkabi ye-Buff Duck Duck
I-Cirebon Duck Noma iRambon
I-Indian Runner Duck
Izinkomo ze-Duck Khaki Champbell
Izinkomo ze-Tegal Duck
Umgogodla Omuhle Ngokuphakelayo Kwezilwane Ze-Reptile
Umgogodla Omuhle We-Arowana Yokudla Kwezilwane
Umgogodla Omuhle We-Koi Animal Feed
Ufuna Ukufunda Ukuzijwayeza
Hlola indawo ye-99 ye-Ranch
Umphakathi we-Yurie BSF